यस्तो जिब्रो भएका व्यक्ति हुन्छन् रोगी, तपाईको जिब्रो कस्तो ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / यस्तो जिब्रो भएका व्यक्ति हुन्छन् रोगी, तपाईको जिब्रो कस्तो ?
admin January 26, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 59 Views
काठमाडौँ । जिब्रोको रङको मद्दतले तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको जिब्रोको रंग परिवर्तन हुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाई कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। वास्तवमा, जिब्रोको रंग सामान्यतया हल्का गुलाबी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ रोगको कारण जिब्रोको रंग परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले जिब्रोको रङ परिवर्तन भएमा बेवास्ता नगरी चिकित्सकसँग जाँच गराउनुहोस्।
सेतो जिब्रो : जिब्रोको सेतो रङले पनि गम्भीर रोगको संकेत गर्छ। जिब्रो पूरै सेतो हुन थाल्यो भने शरीरमा पानीको कमी हुने समस्या मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पानी बढी पिउनुपर्छ । जसले गर्दा शरीरमा हुने डिहाइड्रेसनको समस्या ठीक हुन्छ ।
धुम्रपानका कारण जिब्रोको रङ पनि सेतो हुन्छ । ल्युकोप्लाकिया रोगका कारण कतिपयको जिब्रो सेतो हुन थाल्छ ।
Previous यी ३ राशिको हुन्छ छिट्टै विवाह !
Next भाईरल ज्वरो भगाउने ५ घरेलु उपाय ! सबैले जानीराखे राम्रो नछुटाई पढ्नुहोला